Petrus Romanus, 29 Septambra 2021 | Manuel Silveira
← Petrus Romanus, 7 Oktobra 2021
Events Are Accelerated →
FAST an’ny masinina MICHAEL, GABRIEL ary RAPHAEL
29 SEPTAMBRA 2021
Androany, ry fanahiko malalan’i Jesosy, Mpamonjy antsika be fitiavana. Fetin’ny arkanjely malalantsika: Saint Michael, Saint Gabriel ary Saint Raphael.
Voahombo tamin’ny hazo fijaliana izao tontolo izao noho ny Covid-19 izay manahirana , izay mahatonga ny olombelona hikatona noho ny fahalemen’ny Governemanta, izay namela ny olombelona hikatona tamin’ny fihetsiky ny olombelona, ​​namela ny olombelona hotarihin’olombelona, ​​izay tsy araho Jesosy, fa araho ny fahalemen’ny tsy fahafahan’ny olombelona mamantatra ny Marina.
Mba hanampiana ny olombelona dia manome soso-kevitra ny fanafody, Ivermectin na Hydroxychloroquine aho . Manoro hevitra anao aho mba tsy hanaiky ny fanafody natolotry ny manam-pahefana.
Androany, amin’ny andro firavoravoan’ny arikanjely lehibe, mangataka aminao aho mba hihainoanareo tsara, satria ny Antikristy dia manao hetsika hamotika ny olon’Andriamanitra sy ny fiangonana katolika romana sy apôstôlika.
Araka ny fantatrao ny Fanjakan’ny Papa Benoit , fantatra amin’ny anarana hoe (Emeritus) – efa antomotra ny fotoany. Aza hadino ny mijery ny hetsik’i Russia sy China , satria rehefa nandao an’i Roma ny papa Benoà dia ho fantatrao fa tonga ny fotoana izay i William John the Baptist Costellia, no handray ny toeran’ny volo farany an’ny fiangonan’i Kristy, tahaka ny hataoko. fantatra amin’ny anarana hoe Papa Peter II – fantatra koa amin’ny Little Abraham II .
Mangataka amin’ireo zanako malalako aho mba tsy hahatsapa ho very na kivy, satria Andriamanitra sy Maria, renin’i Jesosy, dia hiambina antsika, koa aza kivy. Izao tontolo izao amin’izao fotoana izao dia fehezin’ny Illuminati sy ny Elite – ary bebe kokoa, ny Antikristy . Saingy Andriamanitra dia mandamina ny Tafiky ny Fahamarinana, izay 50 tapitrisa mahery ary hihamatanjaka rehefa mandeha ny fotoana.
Ry vahoaka malalako, mahereza sy matokia ny Fahasoavan’Andriamanitra, satria manjary jamba ny zanak’olombelona – fa Andriamanitra amin’ny heriny sy ny fahatsarany no miambina anao. Andriamanitra dia nanangana ny mpanjaka frantsay ary miasa miadana izy. Lehilahy tsara sy masina izy ary miara-miasa amiko, koa aza hadinoina fa mifehy an’izao tontolo izao Andriamanitra ary mamela ny Antikristy hahatanteraka ny fikasany haka an’izao tontolo izao, fa amin’ity indray mitoraka ity dia manana fotoana voafaritra ny Antikristy , avy eo dia hifarana tampoka izany. Azontsika atao ny manantena ny fotoana dia hanomboka amin’ny taona 2022 ka hatramin’ny 2030 . Mazava ho azy fa tsy fantatsika ny ora marina, fa fantatsika fa ny fitondran’ny Antikristy feno dia enina herinandro aorian’ny fampitandremana lehibe , izay antenaintsika aorian’ny fandosiran’ny Papa Benoitso (Emeritus) an’i Roma.
Ny mpanjaka sy ny tenako dia manomana ny fiangonana sisa tavela , koa mba tsarovy izahay amin’ny vavaka ataonareo.
Andriamanitra tsy nanadino anao fa mangataka vavaka maro Izy. Mivavaha azafady mba hanafahana ahy amin’ny gadra napetrak’i satana amiko hahafahako mankany Filipina hanangana ny Vatican hitarika ny fiangonana. Mivavaha mba hahafahako mandeha mankany Singapour sy Allemà ary firenena maro hafa alohan’ny hahatongavany tsy ho vita. Mivavaha ho an’ny mpanjaka izay mila ny fanohanan’ny Fiangonana.
Ry vahoaka malalako, aza ketraka ny finoanao, fa matokia an’Andriamanitra sy ny Renintsika Masina, Mary, satria akaiky ny fandresen’ny vadintsika, rehefa ho satro-boninahitra Mediatrix of All Graces, Co-Redemptrix ary Advocate izy , satria ny Fahagagana rehetra dia tokony hitranga tsy ho ela. Aza adino ny mivavaka ho ahy koa. Mangataka an’i Jesosy hitahy anao aho: + tahak’izay hitahiako anao: +
Jesosy sy Maria anie hitahy anao +
This entry was posted in Malagasy and tagged Petrus Romanus. Bookmark the permalink.